Gawaadhida cusub waxay leeyihiin teknooloji lagaga hortago wasakhda naaftada. Wasakhda tuunbada hawada naaftadu wuxuu saameyn karaa cid kasta – gaar ahaan kuwa ku nool, ka shaqeeya iyo kuwa taga dugsi ku dhaw jid baabuurta oo wayn. Wasakhda gaadhiga xamuulka ah ee shidaalku waxa uu leeyahay waxyeelo caafimaad oo aad u daran sida xiiqda, wadne xanuunka, iyo mushkilado kale oo wadnaha iyo neefsiga ah.
Hel $60 adiga oo dhamaystiranaya tobobarka fiidyawga ah ee gaaban ee hagaajinta gaadhiga wayn.
Mulkiilayaasha gaadiidka wayn ee ka shaqeeya dekada Northwest Seaport Alliance (Seattle and Tacoma), waxa aad heli doontaa $60 marka aad gasho tobobarkan oo aad baasto imtixaanka gaaban. Waxa aanu ku qiyaasnaa inay qaadanayso ku dhawaad hal saacadood inaad daawato fiidyawga tobobarka ah iyo inaad gasho imtixaanka.
Si aad ugu qalabto $60 waa inaad daawataa fiidyawyada oo aad dhamaystirtaa imtixaanka boga hoostiisa ah. Tani waa siin mudo gaaban ah oo 500 ee ugu horeeya ah ama ilaa lacagtu dhamaanayso.
Hadii aad leedahay gaadhi wayn oo ka shaqeeya dakada Northwest Seaport Alliance, waxa aad heli doontaa $60 maadaama oo aad daawatay fiidyawga oo aad imtixaankana aad baastay. Waxa aanu ku qiyaasnaa inay qaadanayso ku dhawaad hal saacadood inaad daawato fiidyawga tobobarka ah iyo inaad gasho imtixaanka.
Hadii aad wax su’aal ah qabto fadlan la hadal 206-689-4054 ama iimeel u dir bethc@pscleanair.org.